Billström muxuu ka yiri go’aankii maxkamada? | Somaliska
Wasiirka Socdaalka Tobias Billström oo ka qeyb galiyay shir ku saabsan armaha Socdaalka iyo isdhexgalka oo ka dhacayay magaalada Halmstad ayaa dhowr su'aalood oo ku saabsan go'aankii maxkamada Socdaalka ay ka soo saartay arimaha Soomaalida waxaa waydiiyay Anders Lindström oo ka tirsan Dalada u dooda mideynta reeraha (Nätverk för rätten till familjeåterförening). Anders ayaa mowduuc uu ka qoray kulankii wasiirka waxa uu sheegay in siyaasada dowlada ee ku wajahan arintaan ay u muuqato mid nidaamka iyo kontrolka laga hormarinayo dadka dhibaateysan. Wasiirka oo la kulmay ururka lagu magacaabo ECPAT oo la dagaalama ka ganacsiga caruurta ayaa sheegay in kulaankaas uu ka ogaaday qataraha ka ganacsiga caruurta. Iyadoo horey isla ururkaan uu u cambaareeyay sheegashada dowlada ee ah in ay ka hortagayaan ka ganacsiga caruurta. Billström ayaa u muuqday in uu sawir qaldan ka soo qaatay kulankii uu la yeeshay ECPAT, iyagoo sheegay in aysan war ka duwan kii hore u sheegin wasiirka. Su'aashii ugu horeysay ee uu waydiiyay Anders ayaa ahayd in maadaama baarlamaanka xisbiyada ku jira ay diyaar u yihiin in la badalo sharciga, goormee ayaa taas la sameynayaa? Wasiirka ayaa sidii caadada ahayd wax jawaab ah oo lagu qanci karin aan bixin..."Sidaad la socota heshiis ayay gaareen dowlada iyo xisbiga MP balse..." ayuu jawaabtiisa ku bilaabay kuna dhameeyay. Sidee loogu sharxi karaa waalidiinta caruurtooda loo diiday sharciyada adag iyo go'aamada cusub? Haa, waa in ay la xiriiraan sharci yaqaanada, ka dib go'aankii ugu dambeeyay waxay noqoneysaa mid iska cad in codsiyada aan dib loo celin. Hadana hadalkiisa ayuu sii watay "Maya waxaan ka wadaa qofku waxa uu la xiriiri karaa waaxda isdhexgalka ee kamuunada ama Hay'adaha madaxa banaan. Masuuliyada ma leh Laanta Socdaalka" ayuu ku soo afjaray. Sida iska cad hadalka Billström ayaysan ku jirin wax nuxur ah oo la taaban karo. Wasiirkaan ayaa ah nin ay adagtahay in jawaabo cad laga helo. Hada ka hor mar fadeexo lagu eedeeyay la xiriirta Ciraaqiyiinta ayuu in ka badan 10 jeer ku jawaabay jawaab ka bixin maayo...Marka waa nin nuucaas ah. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka Socdaalka ayaa ah ninka hada looga fadhiyo sidii xal loogu heli lahaa shuruuda Soomaalida saaran, rabitaankiisa ayaa u muuqda mid aan cadeyn sidaa darteed Soomaalida waxaa waajib ku ah in dadaalada iyo cadaadiska la siyaadiyo. Daawo mar wax laga weydiinayo fadeexadii Ciraaqiyiinta .....
Wasiirka Socdaalka Tobias Billström oo ka qeyb galiyay shir ku saabsan armaha Socdaalka iyo isdhexgalka oo ka dhacayay magaalada Halmstad ayaa dhowr su’aalood oo ku saabsan go’aankii maxkamada Socdaalka ay ka soo saartay arimaha Soomaalida waxaa waydiiyay Anders Lindström oo ka tirsan Dalada u dooda mideynta reeraha (Nätverk för rätten till familjeåterförening).
Anders ayaa mowduuc uu ka qoray kulankii wasiirka waxa uu sheegay in siyaasada dowlada ee ku wajahan arintaan ay u muuqato mid nidaamka iyo kontrolka laga hormarinayo dadka dhibaateysan.
Wasiirka oo la kulmay ururka lagu magacaabo ECPAT oo la dagaalama ka ganacsiga caruurta ayaa sheegay in kulaankaas uu ka ogaaday qataraha ka ganacsiga caruurta. Iyadoo horey isla ururkaan uu u cambaareeyay sheegashada dowlada ee ah in ay ka hortagayaan ka ganacsiga caruurta. Billström ayaa u muuqday in uu sawir qaldan ka soo qaatay kulankii uu la yeeshay ECPAT, iyagoo sheegay in aysan war ka duwan kii hore u sheegin wasiirka.
Su’aashii ugu horeysay ee uu waydiiyay Anders ayaa ahayd in maadaama baarlamaanka xisbiyada ku jira ay diyaar u yihiin in la badalo sharciga, goormee ayaa taas la sameynayaa?
Wasiirka ayaa sidii caadada ahayd wax jawaab ah oo lagu qanci karin aan bixin...”Sidaad la socota heshiis ayay gaareen dowlada iyo xisbiga MP balse…” ayuu jawaabtiisa ku bilaabay kuna dhameeyay.
Sidee loogu sharxi karaa waalidiinta caruurtooda loo diiday sharciyada adag iyo go’aamada cusub?
Haa, waa in ay la xiriiraan sharci yaqaanada, ka dib go’aankii ugu dambeeyay waxay noqoneysaa mid iska cad in codsiyada aan dib loo celin. Hadana hadalkiisa ayuu sii watay “Maya waxaan ka wadaa qofku waxa uu la xiriiri karaa waaxda isdhexgalka ee kamuunada ama Hay’adaha madaxa banaan. Masuuliyada ma leh Laanta Socdaalka” ayuu ku soo afjaray.
Sida iska cad hadalka Billström ayaysan ku jirin wax nuxur ah oo la taaban karo. Wasiirkaan ayaa ah nin ay adagtahay in jawaabo cad laga helo. Hada ka hor mar fadeexo lagu eedeeyay la xiriirta Ciraaqiyiinta ayuu in ka badan 10 jeer ku jawaabay jawaab ka bixin maayo…Marka waa nin nuucaas ah.
Si kastaba ha ahaatee, wasiirka Socdaalka ayaa ah ninka hada looga fadhiyo sidii xal loogu heli lahaa shuruuda Soomaalida saaran, rabitaankiisa ayaa u muuqda mid aan cadeyn sidaa darteed Soomaalida waxaa waajib ku ah in dadaalada iyo cadaadiska la siyaadiyo.
Daawo mar wax laga weydiinayo fadeexadii Ciraaqiyiinta …..
Isbedelo laga yaabo in lagu sameeyo SFI
Reer Nairobi iyo rajada Sweden
Barnaamijka Hello Somaliska – 11-03-2012
May 23, 2011 at 06:34
asc marka hore waad mahadsan tahy bahda somaliska & jimcaale oo markastaa xalka mesha oo maraayo inala socodsiyaa inkastan wali wasiirka socdalka & dowlada looga fadhiyaa reeraha somalida xalkooda koleey illaah ayaa haayo xal alle ayaan ka baryenaa in mesha eeyku jurto qeer mida kale somalidane waxan ku bugadinaa inlaga sii wadaa dadaalka halkeediii
Fardowsa kuria says:
May 23, 2011 at 10:51
Asc Jimcaale iyo all asxaabta intaan arkaayey qof su,aal la weydiiyey wax ka qalafsan wasiirkaan ma arkin runtana wuu iska indhotiraa waa siyaasadiisa arintoo dhan asagey ku soo biyo shubatey markaasuu leeyahay ha la xiriiraan qeybaha kammuunada iyo isdhexgalga sow taas yaab maaha si kastey ahaataba dadaal ayaa nalaga doonyaa Ilaahey ha nala garabgalo
May 23, 2011 at 10:57
Haa Fardowsa waxaa la dhihi karaa waa nin qalafsan..Daawo Videoga aan soo galiyay ee mar wax laga waydiinayay fadeexadii Ciraaqiyiinta iyo Wikileaks.
May 23, 2011 at 11:46
kkkkkkkkkkkkkkk Jimale aad ayaan u qosley walaahi gabadha inta goor ey ku celcelisey su,aasha iyo siduu uga meermeerayo Alla is qaafin badanaa. Waan arkeynaa bal siduu uga jawaabo arinta soomaalida iinsha allaah intaas uga hari mayno
May 23, 2011 at 12:04
Asc mr jimcale waxan ku waydiiyay sxb rajada reeraha kala maqan hadertan waa sidee mudan sugaynay sxb qaabkeda markad egto sida ay dowlada wax uwadan maka tashanaa mise wan ku tashan bal no waydii sxb dowlad isku sheg ama tos hanogu fasaxan ama hana diidan wa war lagartay adunyadena kale aan raacane mahadsanid
May 23, 2011 at 13:56
Wasiirku socdaalku waagii hore Soomaalida waa u fiicnaa laakiin hadda waa isbedelay talow muxuu arkey yaabney,e.
cabdullahi caadle says:
May 23, 2011 at 14:38
waa loobahanyahay dhab ahaantii in sida tan nala yeelo ! anaga ayaa wadankena iska soo gubnay kana in lagala ilaashado waa xaq madaama aan keena aan lahayn soo gubnay mid aanan lahayn ma u baqeeno soo ma aha waa in laysku ilaaliya layskana ilaaliyaa qaxootiga oo idil jämlighet majireeso si weliba halaguu qabilo ama xitaa kudhahlo awoowahaa ayaa maodow ahaa ama ayeeyadaa lolz allow wadankeena anaga ayaa udhalanaye inoo wanaaji adinkana aamin dhahoo uduceeya meeshaan haku dhegineee
May 23, 2011 at 15:33
C/raxman: Rajada waxaa la dhihi karaa waa ka roontahay sidii sanadkii hore waayo hada arinta waxay ku jirtaa gacanta dowlada iyo heshiiskii ay la gaareen xisbiga Deegaanka. Xisbigaas ayaa si weyn ugu riixaya in arintaan go’aan laga gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan marka rajada hada ma xuma balse waqti cayiman ma hayno.
May 23, 2011 at 18:44
Asc dhamaan somaalida Halkaan Isugu timid Runtii wa kaxumahay arimaha Qoysaska soomaaliyeed ee kala amqan o hooyadii ama abihii Halkan joogo Ilmiihiina ay xabadii ama wadamada deriska waalid la aan mas uuliyad la aan kujoogaan waa dareemi karaa Dhibaatadaas iska sabra wax kasta waqti ayay leeyihiin Dadaalkina si wada Ilaahayna talada saaarta asigaa wax kasta awooda Insha alah Insha alaah Insha alaah waxaa lagu tagi donaa waalid iyo Ilmihiisa Si farxad ah kuwada nool hal meel melay ahaataba asc